Fampiasan-kery :: Mpanao gazety roa niharan’ny herisetran’ny polisy • AoRaha
Niharan’ny herisetra nataona polisy, nandritra ny fijerena sy fanarahana ny fifaninanana basket-ball « Smatch-In », tetsy amin’ny lapan’ny Fana- tanjahantena Mahamasina, afak’omaly hariva, ny mpanao gazety roa. Naratra vokatr’izany ny iray tamin’ izy ireo, araka ny voalaza.
Nianjera io mpanao gazety io rehefa voasintona teny an-tanany ny fakantsary nentiny. Ny hariva io ihany dia nifampiresaka sy nifampitantara ny zava-nisy teny amin’ny Kaomisaria foibe teny Tsaralalàna ny an-daniny sy ny an-kilany: ireo mpanao gazety roa sy ny mpitandro filaminana voatondro.
«Nahita polisy nifamaly ilay namako ka namoaka ny fakantsary naka sary azy ireo. Tsikaritr’ireo polisy anefa izany. Nosintonina ny fakantsary. Nianjera vokatr’ izany izahay. Naratra ny namako. Sady nanompa ireo polisy ireo», araka ny fitantaran’ilay vehivavy mpanao gazety.
Voalaza fa teo no ho eo ihany dia nampandre ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina ilay mpanao gazety. Nifampita ny resaka ka naheno ihany koa ny teo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka. Nampa- nantsoina nankeny amin’ny Kaomisaria foibe, etsy Tsaralalàna avy eo, ireo mpanao gazety niaraka amin’ireo polisy.
«Niala tsiny taminay noho ny nataon’ireo polisy ireo ny teny amin’ny Kaomisaria foibe», araka ny fanazavan’ireo mpanao gazety tafiditra tamin’ ity raharaha ity.
Noezahina nantsoina an-telefaonina nanontaniana momba an’ity tranga ity ny teo anivon’ny Polisim-pirenena, omaly. Nisafidy ny tsy hanome fanazavana ny tao amin’ny sampana misahana ny fifandraisana (Sicri) sy ny lehiben’ny Kaomisaria foibe etsy Tsaralalàna ary ny tale jeneralin’ny Polisim-pirenena. Nilaza kosa ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny Contrôleur Général de Police, Rafanomezantsoa Roger fa: «handraisana fepetra manoloana ny Filankevi-pitsipi-pifehezana ireo polisy voatonona tamin’ity raharaha ity ireo».
Fitondrana Lavanila :: Teratany Sinoa voatazon’ny polisy etsy Tsaralalàna
Hain-trano :: Kilan’ny afo ilay rangahy natory tao anaty tranohazo